Nsonaazụ nke ịjụ obi abụọ maka ụzọ gị na Descartes - Rabbi Michael Avraham
Nsonaazụ nke ịjụ obi abụọ maka usoro gị na Descartes
Nzaghachi > Atiri: Izugbe > Nsonaazụ nke ịjụ obi abụọ maka usoro gị na Descartes
Ezi uche Ajụrụ ya afọ 2 gara aga
Achọrọ m ịjụ maka ihe m nwetara na webụsaịtị ndị nchegharị,
Enwere ajụjụ Kant a maara nke ọma na ọ dịghị njikọ dị n'etiti isiokwu na ụwa kwa otu ma ọ dị ka ọ dị mfe, mgbe ahụ, ajụjụ na-ebilite ka anyị ga-esi tụkwasị obi n'echiche anyị na e nwere njikọ n'etiti ụwa na mmadụ. A sị ka e kwuwe, ọ gaghị ekwe omume ịnye ihe akaebe dị otú ahụ n'ihi na anyị na-ezute mgbe niile a na-ajụ ajụjụ, ma ọ dị ka ndị na-enweghị obi abụọ na-anabata echiche ahụ na echiche ndị bụ isi ekwesịghị iweta ihe àmà na karịsịa na nke a bụ nkọwa ha dị ka ihe atụ. axiom.
Ya mere, achọrọ m ịjụ, bụ echiche na-ezighị ezi na ihe ọ bụla na-enweghị ihe kpatara ya bụ ihe a na-enyo enyo, n'onwe ya bụ echiche?
Ọ bụrụ otú ahụ, mgbe ahụ, ọ dị ka anyị nwere ụdị ọrụ iche n'ezie banyere echiche anyị bụ isi, ma dị ka a maara na rabaị adịghị anabata nke a, ma dochie anya n'ezie na ezi uche, ma otu ahụ ka ọ dabara na akụkọ ahụ? Onwere ike nke puru omume na-eche na ị nabatara nkwupụta enweghị obi abụọ?
Ọzọkwa, m nnọọ otu ugboro wee na ajụjụ banyere Descartes onye dị ka ya na-adịghị ka ọ na-enweta ya niile, ma naanị ekele ontological àmà gbakwunyere na Chineke dị mma na-agbalị idozi okwu, ma olee otú o si were na ezi ihe. bu ebumnobi?
Amaghị m na m ghọtara ajụjụ a. Otu o sila dị, m ga-ekwu ntakịrị okwu n'ihe ị kwuru:
Kant ekwughị na ọ dịghị njikọ n'etiti echiche anyị na ụwa. Enwere njikọ n'ezie, yana otu esi eme ya. Ọ na-ekwu naanị na ihe oyiyi anyị na-ahụ bụ ihe maara ihe. Ma ọ na-anọchi anya ihe dị n'ụwa n'onwe ya. Dịka ọmụmaatụ, ikuku electromagnetic na ụwa na-atụgharị n'ime ìhè na nsụhọ anyị. Ọ nweghị njikọ dị n'etiti ha? O doro anya na enwere njikọ. Ìhè bụ ihe ngosi anya nke ebili mmiri electromagnetic.
Enwere ajụjụ nke ewelitere n'ebe Kant nọ, ọ bụ site na ebe ọ maara ọbụna na e nwere ụwa n'onwe ya ma ọ bụrụ na ihe niile nwere ike ịnweta anyị bụ nanị ihe ngosi (ihe mgbagwoju anya). Echere m na nke a bụ nsonaazụ nke ụkpụrụ nke causality, nke bụ ụkpụrụ nke ụzọ. Site na ụkpụrụ a, ọ na-esote na ọ bụrụ na e nwere ihe omimi, ekwesịrị inwe ihe dị n'ụwa na-akpata ya.
Aghọtaghị m ajụjụ banyere ihe na-enweghị ihe kpatara ya. Ị bu n'obi ịjụ ma ọ dị ihe na-enweghị ihe kpatara ya? Na ụkpụrụ ọ ga-ekwe omume ee, mana ụkpụrụ nke causality na-eche na ọ bụghị. Dịka ọmụmaatụ, n'echiche nke quantum, mmekọrịta dị n'etiti ihe kpatara na mmetụta dị iche na ọ dịghịdị adị n'ezie n'echiche nkịtị.
Ị na-agwakọta eziokwu na eziokwu. Na m na-eche na ọ dịghị ihe doro anya na ọ dịghị ihe gbasara nkwurịta okwu n'ụzọ ọ bụla.
Obi abụọ na-emegide ezi uche. Onye na-enyo enyo na-eche na ọ bụ naanị ijide n'aka na-enye eziokwu, dịka ọ na-esi n'ihe ị na-ekwu pụta. Mana ị mejọrọ nke ahụ.
Ezi uche Zara 2 afọ gara aga
Daalụ nke ukwuu maka okwu ụfọdụ m ghọtara na m ga-agbalị ịkọwa akụkụ m na-aghọtaghị.
2. Ajụrụ m gbasara isi okwu a kwa. Onye ọ bụla na-adịghị skeptical yiri ka ekweta na a ga-enwe njikọ n'etiti ụwa na onu (na-ekwu anya na ìhè na Doge 1), ma ọ bụrụ na anyị niile nsụhọ na-wuru naanị na a priori ụkpụrụ dị ka causality ọ ka nwere ike ịbụ. tụgharịrị n'ihi na-apụghị ịgụta ọnụ ihe otú mmetụta si uche e kere, ọbụna Descartes Bụ ihe mere n'okpuru a sara mbara uche; Ma ọtụtụ n'ime anyị echeghị na ọ bụ ezi ihe kpatara ya. Ọ bụrụ otú ahụ, ụkpụrụ nke causality naanị adịghị ka ọ zuru ezu, ma ọ chọrọ ihe ọzọ, ọ bụ ezie na n'ezie ọ dị ka ọ dị n'azụ.
3. Achọghị m ajụjụ banyere ihe omume ma ọ bụ na ọdabara, ọ bụ ezie na n'ezie enwere njikọ, mana tumadi banyere echiche na nkwupụta, dịka ọmụmaatụ nkọwa nke echiche bụ na ọ nweghị ihe kpatara ya. M na-eche naanị na nke a ihe nwere ike kwere, na ụdị echiche na Chineke bụ arịlịka nke na-akpata na ụwa. Ma ọ bụrụ na anyị adịghị enwe obi abụọ n'echiche, olee otú anyị pụrụ isi kwuo na ihe a na-ejighị n'aka ma nweekwa akụkụ nke ezi uche? A sị ka e kwuwe, echiche ọ bụla banyere ezi uche na-eche n'azụ na a pụrụ ịjụ ya ajụjụ.
3. N'aka nke ọzọ, onye na-arụ ụka na usoro ya dị njikere n'ezie inwe obi abụọ n'echiche, ma ọ bụrụ otú ahụ, ọ pụkwara inwe obi abụọ n'echiche na ekwesịrị ịjụ echiche ma ọ bụ na ihe ọ bụla n'enweghị ihe kpatara ya adịghị mma. Ọ bụrụ otú ahụ, ọ̀ dị ka ọ̀ na-egbutu alaka ya? Mba?
5/4 M pụtara dị ka 3 Risha.
3. Ị na-eji okwu ahụ bụ "ihe kpatara" mee ihe n'ụzọ m na-aghọtaghị. Ị pụtara uto/ntụgharị uche?
N'ezie enweghị ihe ndabere maka ntọala. Ma ọ bụghị eziokwu na anaghị m enwe obi abụọ echiche. Enweghị nkwupụta, echiche ma ọ bụ nkwubi okwu, doro m anya.
Onye na-eche echiche Zara 2 afọ gara aga
N'ezie m pụtara n'akụkụ nke uche / uto.
Nke mbụ, banyere 2 ị kwenyere na naanị anyị nwere echiche na ihe anyị na-ahụ bụ eziokwu? N'ihi na o yighị ka ọ ga-ezuru ihe ọ bụla a priori ụkpụrụ ịbụ na ọ nwere ike * naanị * imeri na nnabata nke ụwa ihe onwunwe.
Yabụ ọ bụrụ otu a, kedu ka ị ga-esi nweta ụlọ ọrụ mana n'ụzọ na-ejighị n'aka? Nke a bụ ihe edoghị m anya nke ukwuu.
Ma ọ bụrụgodị na ị na-ekwu na ọ ga-ekwe omume, n'ihe gbasara ihe ọ ga-abụ ihe a na-ejighị n'aka? N'ihe gbasara mkpesa ọzọ ma ọ bụ obi abụọ ọzọ? Eleghị anya, otu obi abụọ ahụ ga-eche na e nwere nkọwa ọzọ nke bụ isi na kwa, ma ọ bụ nke mbụ usoro nkọwa na isi ya bụ axiomatic. Ma mgbe ahụ ọ pụtara nanị na echiche anyị chere na ọ bụ ihe ndabere abụghị ihe dị otú ahụ, kama nkwubi okwu sitere na ihe bụ isi.
Ọ gwụla ma ị nwere obi abụọ ma kwuo na enwere ike ịjụ echiche, ma olee ebe ohere ahụ dabara na foto a? N'ihi na ihe niile maka ya bụ otu aka aka aka ike. (Na echiche na ihe niile bụ aka ike bụ aka ike ...)
Ma ọ bụrụ otú ahụ, ka anya dị ka ị ga-esi skeptical na-ekwu mgbe ahụ ọ dịghịkwa ndaba na eziokwu na ihe yiri ezi uche m, n'ihi na ihe niile puru omume bụ naanị na larịị nke isiokwu ezi uche ma ọ dịghị njikọ n'etiti ya na ebumnobi ụwa na. enweghị ike ijikọ ya dị ka okwu mmalite.
Ma ọ bụrụ na ị naghị enwe obi abụọ, mgbe ahụ ị naghị ajụ echiche nke agbanyeghị…
Onye ikpe ikpe ikpeazụ Zara 2 afọ gara aga
"Otu ikuku electromagnetic n'ụwa na-asụgharị ka ọ bụrụ ìhè"
Ebili na-atụgharị n'ime akara neuronal. Ịsụgharị n'ime ihe ọzọ Ịsụgharị n'ime ihe ọzọ… N'ụzọ ụfọdụ na njedebe e nwere ìhè.
Enweghị njikọ kpọmkwem n'etiti ọkụ na ife efe. Ihe ndị gbara ya gburugburu dị nnọọ na-apụtachaghị ìhè.
Atufuru m gi kpamkpam. Ị na-agwakọta mmekọahụ na enweghị mmekọahụ ugboro ugboro, na anaghị ezo aka n'ihe m zara. Azala m ihe niile.
Onye na-ekpe ikpe, ọ bụ njikọ kpọmkwem. Otu na-akpata nke ọzọ, ọ bụrụgodị na a na-eme ya site na mgbaghara nke ọtụtụ nzọụkwụ. Mgbe ị gbasasịrị ụzọ n'etiti ikpochapụ egwuregwu ahụ na ịgbanye ọkụ, ị ga-ahụ n'ebe ahụ ụfọdụ usoro etiti. Gịnị mezie? Otu na-akpata nke ọzọ. Enwere ike Nafam ma ọ bụrụ na enwere usoro etiti? Na na anyị na-eme ihe banyere ike nke ike ya?
Na-anabata ọnwụ Zara 2 afọ gara aga
Ọ bụrụ na ị funahụrụ m, kedu ka ị zara?…
Ihe na-edoghị m anya bụ na a na-ekwenyekarị na nkọwa nke ụlọ bụ na ọ dịghị ihe kpatara ya.
Ma ọ bụrụ otu a, olee otu a ga-esi jụ ajụjụ gbasara ihe n'ebughị ụzọ were otu ihe kpatara ya? Dị ka ị na-ekwu na ị na-eme.
Ya mere, n'akụkụ nke ọzọ ị na-enweta na echiche nwere ike ịjụ ya mere kedu ka ị ga-esi na-eche na ihe bụ karịa ma ọ bụ obere? E kwuwerị, ị nwekwara ike itinyekwu obi abụọ na echiche nke puru omume…? Ya mere, nkwubi okwu gị nwere ezi uche ịbụ onye sulfist. Ma ọ bụ ị ga-enwe obi abụọ n'echiche na ị nwere ike inwe obi abụọ na ị ga-arapara.
Ma a ghaghị ikwu na e nwere na mmalite nke iche echiche ụfọdụ * ụfọdụ * ga-adị ntakịrị ka ọ dị.
Dịka ọmụmaatụ, echiche na ihe anyị chere na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya bụ n'ezie ebumnobi (ọbụlagodi ma ọ bụghị na ọ bụchaghị ebumnobi). N'ihi na ọ bụ naanị site n'ebe ahụ ka a ga-esi kwuo na ndị ọrụ nwere ike, wdg. Ma ọ bụrụ na ị na-ekwu na anyị niile echiche mgbe nwere ụfọdụ pasent na obi abụọ e bibiri n'ime ha, mgbe ahụ na obi abụọ ga-guzobere na-esonụ skeptical na-ekwu na bụ mpụga ha, na dị ukwuu dị ka ị bụ onye obi abụọ ị nwere ike mgbe na-ekwu na ihe bụ ihe bụ. dị ka ezi uche dị na ya…
Ya mere, achọrọ m ịsị na ị kwenyekwara na e nwere ihe ochie gbasara usoro gị na ọ bụghị ihe niile bụ naanị plausibility. Ma ọ bụ ihe nwere ike ime bụ ụfọdụ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na m ziri ezi, yabụ ihe mara mma ịhụ bụ na ọ ga-akara gị mma ịbụ onye postmodernist karịa onye isi 😉
Ma ọ bụ ezie na ọ dịghị ihe àmà na-ekwu maka ya, Zara 2 afọ gara aga
Ma ọ bụ ezie na e nweghị ihe àmà a ga-ekwu maka ya, e nwere akara nke ikwu okwu n’okwu mmalite nke akwụkwọ ndetu nke okwukwe:
"N'ihe m maara nke ọma, mmadụ enweghị ohere iru n'aka n'ọhịa ọ bụla." Ọ bụrụ na ọ chọtara ụzọ iji nweta obi ike dị otú ahụ, ọ nwere ike mehiere (n'ezie! 🙂).
Ọ pụtara na e nwere ihe ụfọdụ na isi na ala nke echiche anyị na njedebe nke ụbọchị nke na-ekwu na e nwere nchikota n'etiti ezi uche na ụwa ọzọ na-aghaghị ịbụ na-enwe obi abụọ.
Azịza, m funahụrụ gị ugbu a (kedu ihe ị chọrọ ugbu a) ebe m zara ihe niile mbụ.
oche? Zara 2 afọ gara aga
Usoro gị ọ ga-enwerịrịkwa ntọala ụfọdụ (ọbụlagodi oke), nke anyị ga-anabata nke ọma ọ bụghị naanị n'ihi ezi uche.
Ma echere m na echiche a bụ na ihe dị ka ezi uche dị na ya bụ ihe ezi uche dị na ya na enwere njikọ na nke ahụ. Naanị n'ụzọ dị otú a ka m na-eche na ọ ga-ekwe omume ịkwado ajụjụ m na-enweghị ịdaba na obi abụọ zuru oke na n'aka nke ọzọ ịghara ikwu na ihe niile bụ ihe doro anya.
N'aka nke ọzọ, ị na mbụ kwuru na ị mere n'ezie "na-enwe obi abụọ bụ isi echiche. Enweghị nkwupụta, echiche ma ọ bụ nkwubi okwu doro m anya. "
Mana ọ bụrụ n'ezie ihe ị dere n'ezie, ị ga-enwerịrị ikike ịghọta echiche nke ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụghị (n'ihi na ị bụghị onye nwere obi abụọ….), Ma ikike a bụkwa ụdị echiche ị ga-enwe obi abụọ ma kwughachi ya. ma mgbe ahụ ị ga-enwe obi abụọ.
Echere m na ihe ndị a dị mfe, ma ebe ọ bụ na m na-ahụ na ị bụworị onye ọkà ihe ọmụma nke abụọ na-azọrọ ihe ndị yiri ya mgbe unu abụọ na-ekwupụta na ị bụ ndị na-abụghị ndị postmodernist, achọrọ m ịhụ ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ na okwu m adịghị nkọ. Ị nwere ike iri achicha ahụ ma hapụ ya dum.
N'ihi na ọ na-anabatakwa na ọ dịghị njikọ n'etiti echiche na ọchịchọ ha na ụwa dị ka Kant na onye ọ bụla kwesịrị ịjụ ajụjụ, ma na ndị ọzọ okwu e nwere ezi uche nkwubi ... Nke a abụghị kpọmkwem gị na-ekwu ma n'ikpeazụ nnọọ yiri ịkwaga. Egopụtala m ebe a.
Ana m aza nke ugboro atọ: mba. Ọ dịghị ihe doro anya n'anya m. M na-ekwughachi maka oge nke iri na asaa ejighị n'aka abụghị obi abụọ. Obi abụọ pụtara na ụfọdụ ọnọdụ adịghị mma karịa nke ọzọ. N'aka nke ọzọ, ejighị n'aka na-apụta na ejighị m n'aka.
Nke a. Emechara m.
nwa agbọghọ Zara 2 afọ gara aga
Kedu maka kọlụm geometric nke na-achọ 0. Ọ dị ihe yiri ihe ezi uche dị na ya n'anya m. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya n'anya m na ihe yiri ihe ezi uche dị na ya n'anya m - bụ ihe ezi uche dị na ya. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya n'anya m na ihe yiri m na ọ bụ ezi uche nwere ezi uche. Anyị ga-ebelata ihe puru omume na 99.99% n'aka na nkwupụta ọ bụla ga-atụgharị na njedebe nke 0% n'aka.
Edere m ihe m ghọtara site na ajụjụ ahụ. N'ihi na ọ bụrụ na azịza ya bụ na "ihe yiri ihe ezi uche dị na m" mgbe anyị na-etinye ya na 99.99, mgbe ahụ, ọ bụ 99.99 mgbe niile akaụntụ n'ụwa, na nke a bụ a kpọmkwem na-ekwu na ụwa na ọ bụghị a na-azọrọ na onwe m - mgbe ahụ, anyị chọpụta njikọ siri ike dị n'etiti ezi uche na nke doro anya na n'ezie.
Aghọtachaghị ya Zara 2 afọ gara aga
Kedu ka e si kee ọrụ ebube na ọ dịghị ihe doro anya ma ọ dịghị eduga na obi abụọ?
N'ihi na echiche dum nke ejighị n'aka na ịnọgide na-enwe ezi uche na-eche na e nwere nhọrọ nke abụọ, ma ị nweghị ike nyochaa ihe ezi uche dị na ya n'ihi na ọ bụ n'onwe ya echiche ọzọ na ị ga-ajụkwa ma ọ bụ ezi uche ...
Ihe ịtụnanya a dị ebube dị na ọdịiche dị n'etiti ihiere 90% na obi abụọ 50% (ọ bụrụ na anyị na-ekwusi ike na ịkọwapụta). Ọ bụ ezie na nke a dị ịtụnanya n'ezie na nke a na-apụghị ịghọta aghọta, ọ ka nwere ike ime. M na-atụgharị otu cube ugboro nde isii. M nzọ na a ga-ekesa n'ụzọ ziri ezi na a ga-enwe ihe dị ka nde nsonaazụ kwa wig. Enwere m obi abụọ (ọ bụghị 100%) mana ọ ka nwere ike ịbụ ihe ga-eme. ịtụnanya.
Na m nwere ike intuitively nyochaa uru nke intuition nakwa. Nke a okirikiri bụ nnọọ gibberish. Ọ dị ka ịjụ ka ị si mara na ị bụ eziokwu, ọ bụ gị na-ekpebi na ị bụ onye ziri ezi. Kedu ka nke a si dị iche na arụmụka nkịtị?
N'ezie anyị agwụla quibbles ndị a ruo n'ókè nke ịkwafu ọbara.
Kedu njikọ dị n'etiti nke a na arụmụka nkịtị. N'ebe a, mmadụ anaghị ajụ "kedu ka ị si mara" ma na-anabata ihe niile onye ahụ na-ekwu ma na-atụle naanị usoro ya. Ọ bụrụ na ọ na-ekwu na ya ji n'aka otu narị pasent na ihe ziri ezi, na ọ bụkwa otu narị pasent jide n'aka na ọ bụrụ na ọ na-ejide n'aka na ihe dị mma mgbe ahụ otu narị pasent na ihe dị mma - mgbe ahụ ihe niile dị mma n'ihi na onye nwere ihe ọ bụla ga-afọdụ. Mana ọ bụrụ na ọ nwere naanị ohere, mgbe ahụ okirikiri ịgbagharị na-adaba na efu. Dị mfe. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị m ka ọ nweghị onye ebe a na saịtị ma ọ bụghị gị maara otú ị ga-esi zaa nke a. Ma ọ bụrụgodi na ị nwere azịza smart ị gaghị ahụ ya ebe a na eri. O doro anya na SAG nwere ikpe mara ma gbanwee n'etiti nzaghachi na nzaghachi.
Enwere m olileanya na aghọtara m na mbụ Zara 2 afọ gara aga
n'ezie. M na-ekweta na ọ dị mfe na n'ikpeazụ ike intuition n'onwe ya bụ premise na ị ga-anabata na * doro anya *, ọbụna ma ọ bụrụ na n'ime echiche na-gụnyere ekwe omume na ọ bụghị ụfọdụ, ma ọ dịghị abịa site. onye na-eweta mpụga, ma * esịtidem * obi abụọ Akụkụ nke nkọwa nke ogige a, isi ihe na enwere ụfọdụ mmewere ebe a n'ezie.
Isi okwu a dị mkpa n'ihi na achọrọ m ijide n'aka na ihe ndị a yiri ka ọ dị m mfe kpamkpam bụ eziokwu n'ezie. N'ihi na dị ka m kwuru ná mmalite, e nwere onye dị mkpa nke bụkwa onye ọkà ihe ọmụma dị otú ahụ nke na-agọnahụ nke a kpamkpam ma na-ekwusi ike n'aka nke ọzọ na ọ naghị enwe obi abụọ banyere ihe na-ada ụda kpamkpam.
Ya mere, ofụri mkparịta ụka ebe a ọ ga-adị ka gị onwe gị kwa na-aga maka usoro ya, n'ihi ya, m na-apụghị ịhụ otú ọrụ ebube a nwere ike na-emepụta na karịsịa na m gara aga nghọta gị na nke a bụ mpụga obi abụọ na premise mgbe ahụ ajụjụ na-ebilite. maka ihe kpatara na ọ bụ naanị 10% obi abụọ na ọ bụghị 50% usoro obi abụọ. Mana ahụrụ m na ị kwenyere na usoro m nke m gosipụtara ebe a.
N'ezie, ọ ga-ekwe omume na Shabbat tụrụ aro nkọwa nke na-akọwa otu onye ọkà ihe ọmụma na-eji ntinye nke enweghị njedebe nkọwa na ọ bụ ezie na nkọwa ọ bụla chọrọ nkọwa ka na-ebu obere ibu, nye m n'onwe m ọ na-ada ụda kpamkpam ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ma ọlị. Ma nke ahụ bụ nanị ụzọ m si chọta ya.
Ajụjụ a dịkwa oke mkpa maka mmegide gị megide nkwuputa ndị isi n'otu akụkụ yana ohere nke enweghị atụ n'aka nke ọzọ. Mana ị nwere ike ịsị na ọ bụ ụdị igbu egbu. Ọ bụ ezie na echere m na ọ na-eme ka ọdịiche dị n'etiti onye na-eweta mpụga (PM) na onye na-ebubata ihe dị n'ime (usoro sịntetik gị).
Mba, ọ bụghị n'ezie. Nke a ejighịkwa n'aka.
na-akpasu iwe Zara 2 afọ gara aga
Ị na-anabata ọdịiche dị n'etiti nkwupụta gị na echiche ndị bụ isi n'onwe ha na-adabere n'echiche na-ejighị n'aka, na obi abụọ dị na mpụga nke echiche ndị bụ isi n'onwe ha? (Mgbe ahụ ma ị ga-enweta usoro nchịkwa ọzọ dị ka ebe obibi, ma ọ bụ na a mara gị ikpe dị ka onye na-arụ ụka).
Ma ọ bụghị ya, m n'ezie aghọtaghị otú ị na-adịghị skeptical ma ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ echiche ọbụna na otu percentages (ọ bụrụhaala na ọ bụghị akụkụ nke otu echiche na-ejighị n'aka).
Ọ dị m ka e nwere ihe dị iche ebe a na m eleghị anya na-adịghị aghọta n'ihi na ọ bụrụ na ọ bụghị dị ka m kwuru na m kpam kpam adịghị aghọta otú ị na-ekwu na ị na-adịghị skeptical. Ikekwe ị nwere ike ịkọwa ntakịrị ihe a.
Enweghị m ike ịghọta ebe nsogbu dị ebe a. M na-ekwu ihe dị mfe ma doo anya. Echiche m ejighị n'aka n'anya m. Ọ bụghị n'ihi na ha na-akwa emo mana n'ihi na ejighị m n'aka na ha ziri ezi (enwere ike ọzọ). Amaghị ihe mpụta obi abụọ bụ. Enwere m obi abụọ na echiche m. ọ bụ ya.
ugbu a enwetara m ya? Zara 2 afọ gara aga
Obi abụọ dị n'èzí Ebumnuche bụ na obi abụọ sitere na ebe na-adịghị mma dị ka ụdị mgbagwoju anya nke mpụga maka iche echiche ma ọ bụghị ihe dị n'ime ya dị ka akụkụ nke echiche nke echiche nke dịka ọmụmaatụ na-ekwu na ọ bụ eziokwu na naanị 90% nke ikpe.
Ma ozugbo ị dere, sị: "Echere m na-ejighị n'aka n'anya m". "N'ihi na ejighị m n'aka ma ọ bụrụ na ha ziri ezi (enwere ike ọzọ)." Ya mere, ọ dị ka onye na-eweta ihe na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnọgide na-atụba ya azụ:
N'ihi na ọ na-egosi na e nwere "gị onye na-achọpụta" na dị ka mpụga na ha ị na-ele anya na echiche. Dịka ọmụmaatụ ị nwere ike ịghọta nke a na ilu gị gbasara anya nke uche na ha na-ele anya n'echiche dị anya.
Ma ọ bụrụ otú ahụ, ị ​​ga-ekweta na ị bụ onye na-iche (= anya?) Ha onwe ha zuru ezu n'aka banyere ha ike ịghọta isi echiche nke mere na ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-adịghị enweta ha larịị nke ziri ezi zuru ezu zuru ezu ị ka nwere. nabata n'ezie na ha nwere ụfọdụ larịị nke ziri ezi na ụfọdụ parameters dị ka anya nke echiche, agụụ mmekọahụ na ndị ọzọ. Yabụ na n'akụkụ ọkwa ahụ, ị ​​naghị enwe obi abụọ ma ọlị na ọbụlagodi ezighi ezi n'ime ha dị n'ime ụlọ a.
Ma ọ bụrụ na ị tụkwasị ha obi abụọ na-adịghị mma ọzọ:
1. Mgbe ahụ ị gaghị enwe ike ịpụ na okirikiri nke obi abụọ. 2. Ọ dịghị ihe mere ị ga-eji chee na ọnụ ọgụgụ ọnụọgụ na-enye bụ naanị 10% ma ọ bụghị 50%. Nke a abụrụlarị enweghị obi abụọ zuru oke 3. Ọ ga-eduga n'ọgba aghara nke ị ga-emecha nabata na izi ezi nke eziokwu nke isiokwu gị na-achọ ka ọ ghara ịbanye n'ọtụtụ ihe nwere ike ime. 4. Ị nwekwara ike ịjụ ụkpụrụ nke ịwepụ obi abụọ na-adịghị mma.
J Gbanye Lehava ọ bụ ọgbakọ ịkpa ókè agbụrụ? (Okwu nke 484)
Taa echiche a dị na mpaghara ọha Gbanye Site na ọnwụ nke Prof. David Halvani Weiss nwụrụ anwụ (kọlụm 485)